China Direct engagement shaft akwagharị Centrifugal Fan With Lagre Air FLow factory na ndị nrụpụta | Lvran
Ntuziaka Ntinye aka Na-eme Fan Fan Centrifugal Na Lagre Air FLow
FRP centrifugal fan bụ onye ofufe emere maka ihe eji eme FRP, akpọkwara anticorrosive centrifugal fan. Ohaneze, FRP centrifugal fans nwere ike iji ya na oge na gas na-emefu gas.
A naghị ekwe ka gas nwere ihe ndị nwere viscous, ájá na ihe siri ike na-erughị ma ọ bụ hà 150mg / m3, ikuku gas na-erughị ma ọ bụ hà nhata 60, na iru mmiri nke na-erughị ma ọ bụ hà 100%. FRP centrifugal fans ndị kwesịrị ekwesị n'ihi na elu okpomọkụ ebe. D ụdị na-ezo aka Shaft-chụpụrụ njikọ nnyefe ụdị
CQC ike na-azọpụta ngwaahịa asambodo
Ule nke onye ofufe na-akwado usoro mba GB19761-2009. Ngwa ofufe nwere ike ịgba ọsọ oge niile maka awa 24 na-enweghị mmebi, nwere ogologo ndụ ọrụ, na-echekwa ike ma na-arụ ọrụ nke ọma, na otu akụkụ ahụ na-enwe nrụgide kọmputa na nyocha nje iji melite ike nhazi.
Ọrụ mmezi dị mfe
Iji mmanụ mmanụ emechibidoro mmanụ na-echebe bebi na isi isi site na gas na-emebi emebi, na-agbatị ndụ ndụ, na-ebelata ugboro ole ọdịda, mmepụta ụdị, nkọwapụta edo, akụkụ zuru ezu na akụrụngwa, enwere ike iji ya mee ihe kachasị ọsọ ma ọ dịkarịa ala Ọnụ, nrụnye na ndozi zuru ezu.
Nye ndi otu oru
Nye ụlọ ọrụ ahụ ka ha tụọ arụmọrụ, ịma jijiji, ma nye akụkọ nyocha iji gbochie ọdịda tupu ha emee, ma hụ na onye ofufe ahụ na-agba ọsọ n'okpuru ọnọdụ kacha mma. Enwere ike ịhazi ya na nkọwa pụrụ iche nke onye ahịa iji hụ na onye ofufe ahụ na-agba ọsọ na arụmọrụ kachasị elu.
Uru:elu nnyefe arụmọrụ, nchekwa na ntụkwasị obi, na oke ziri ezi chọrọ maka ntinye na ndozi. Naa, ọtụtụ Fans na-ihu ọma chụpụrụ couplings.
Ọghọm:Leba anya na mmechi ya iji zere nsogbu. Mkpughari ndi mmadu na enweghi nsogbu nke rotor bu nsogbu ndi n’enyefe ya.
Nke gara aga: Corrosion, mgbawa na static eguzogide Anwụrụ ọkụ iyuzucha ikuku mmiri Fan
Osote: Industrial Air mmịpụta aro-njikọ centrifugal ofufe
Na Na Na Na Na Achịkwa Iyuzucha Fan
Tdị Belt Drive Centrifugal Fan
Centrifugal ikuku mmiri Ikuku Fan
Nnukwu nrụgide Centrifugal Fan
Ọrụ Centrifugal Fan
Carbon Steel Shaven Nkea Draft ofufe
[Brief iwebata] High okpomọkụ eguzogide ọgwụ carbon nchara ofufe The elu okpomọkụ carbon ígwè ofufe casing, n'ọnụ ụzọ mgbịrịgba, na impeller niile dị ọcha FRP, kpamkpam na-agbanwe agbanwe omenala carbon ígwè agbakọta FRP mmepụta usoro. Njikọ njikọ nke casing na ígwè etiti ịmụta ihe dị mkpa ịkpụzi na ekpuchi usoro ọgwụgwọ, nke kpamkpam dozie onu nke bolt mmebi kpatara corrosion. Onye ofufe nakweere isi okpukpu abụọ, ọ dịghị mkpa ịghachite ...
Low Noise FRP Fan: Ọ nwere ike na ọtụtụ-eji na-agwụ ike nke corrosive acid na alkali gas, n'efu gas ọgwụgwọ na ọcha, nsị deodorization na ndị ọzọ na gburugburu nwere corrosive gas. Nkọwa nke Low Noise FRP Fan: 1. Obere mkpọtụ FRP fan enwetawo mba gbawara-àmà nzere akwụkwọ na elu-tech ngwaahịa akwụkwọ, ofufe casing, tinye mgbịrịgba, impeller na-mere nke elu njupụta FRP, kpamkpam gbanwere omenala carbon ígwè lin ...
Insda mkpuchi tank maka Mbelata Noise
FRP Sound mkpuchi ofufe na-ọtụtụ-eji, na ọdabara a dịgasị iche iche nke na-arụ ọrụ na ọnọdụ, oru oma ike ịzọpụta, azọpụta akwụ ụgwọ, ike uru n'ihi na ị. Arụ ọrụ dị elu, arụmọrụ dị elu, obere mkpọtụ na obere mkpọtụ。 A na-eji ya na mmịpụta na ikpochapu nke corrosive acid na gas alkali, ọgwụgwọ gas na mkpochapu, nsị mmiri nsị, wdg (gburugburu ebe obibi gas).
Faiba glaasi azụ Curved Centrifugal Exhasut ...
F4-72-AType FRP Centrifugal Fan (Direct Motor) ka nke fiberglass mejupụtara ihe gbasara ntụpọ arụmọrụ nke ọla 4-72-A centrifugal fan. Usoro usoro fans nwere ike ibufe gas na-emebi emebi nwere acid, alkali na chemical. Enweghi ike ikunye gas nwere ihe nwere viscous, nwere uzuzu na ihe siri ike (150m ruo m3, ikuku gas ≤60 ℃, iru mmiri iru mmiri ≤100%. Usoro usoro a nke ndị Fans nwere nnukwu ike, wei ...
FRP Sound-àmà Box
Faiba glaasi Sound mkpuchi igbe-ụdị Fans na-bụ-eji na nsị deodorization, ndu deodorization, ọgwụ na chemical ụlọ ọrụ, pickling electroplating, laabu, semiconductor ụlọ ọrụ na ebe ndị ọzọ nwere acid na alkali mmiri na mmiri mmiri nke corrosive gas. Ugbu a, ụda mkpuchi a na-eji ụdị ọkpọ ahụ eme ihe, nke achọrọ na gburugburu mkpọtụ dị ala. Ọ na-adị jụụ mgbe ị na-agagharị, na-adị jụụ mgbe ị na-agba ọsọ ...
Corrosion, mgbawa na static eguzogide Smok ...
Lvyijing fan na-eji echiche dị iche iche dị egwu, na-eji PROE, sistemụ enyemaka CAD maka imewe, ma na-eji akara resin zuru ụwa ọnụ, eriri iko na ihe ndị ọzọ iji mee ka ọ rụọ ọrụ zuru oke, arụ ọrụ kwụsiri ike, mma magburu onwe ya. Lvyijing agbanweela ọdịnala ọdịnala na obere nrụgide FRP nke na-agbapụta agba n'ọnụ ka ọ bụrụ ọnụ ọnụ, nke na-ebelata ọgba aghara na mkpọtụ nke ntaneti ọkụ ma meziwanye ụzọ nke ...
Single Inlet Centrifugal Fan, Iyuzucha Fan, Anu ulo Scrubber, Radial Agụba Centrifugal Fan, Nnukwu nrụgide Centrifugal Fan, Centrifugal duct Fan,